एक दिनमा कति मासु खाने ? यस्तो छ डक्टरको सुझाव - || यूथ फ्रन्टलाइन ||
एक दिनमा कति मासु खाने ? यस्तो छ डक्टरको सुझाव
२०७८ आश्विन २७, बुधबार ११:३१:००
काठमाडौँ । नेपालीको घर घरमा दसैँ भित्रिसकेको छ । दसैँको पहिलो दिन घरघरमा घटस्थापना गरेपछि दसैँ सुरू भएको हो ।
दसैँमा सबैभन्दा धेरै मासु कै परिकार पाक्छन् । यहीकारण दसैँमा मासुको खपत अत्याधिक हुने गर्छ । सामान्य समयभन्दा यो समयमा झन्डै १० गुना बढी मासु खपत हुने अनुमान छ । विशेषत फुलपातीको दिन ल्याएको मासु दसैँभरि लगाएर खाने चलन छ । तर, यसरी सेवन गरिने मासु स्वास्थ्यका लागि भने फाइदाजनक हुँदैन ।
मासुजन्य परिकारमा शरीरका लागि आवश्यक प्रोटिन प्रशस्त हुने भए पनि धेरै मासु खानु शरीरका लागि हानीकार हुने पोषणविद् अरुणा उप्रेतीको भनाइ छ । एकजना व्यक्तिले प्रतिदिन एक सय ग्रामसम्म मासु सेवन गर्नुपर्छ । त्यो भन्दाबढी अस्वस्थ मानिन्छ । ‘चाडवाडमा सबै जनासँगै बसेर खानेकुरा खाने मात्रै काम हुन्छ । पकायो खायो जसले गर्दा भोजनमा सन्तुलन कायम हुँदैन्,’ उप्रेती भन्छिन्,’ मिलाएर खायो भने मासु लाभदायक हुन सक्छ, जथाभावी खाँदा हानीकारक हुन्छ ।’
बडादसैँको समय मौसमी फ्लु जस्ता रोगहरूको संक्रमणको जोखिम पनि हुन्छ । बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाले अझ बढी स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनुपर्छ । मासु आफैँमा अत्याधिक बोसो हुने र पकाउँदा पनि धेरै तेल प्रयोग गरिने भएकोले मासु खाँदा स्वास्थ्यमा असर पुग्ने हुन्छ ।
मासुसँगै दसैँको समयमा मद्यपान गर्दा यो झनै हानिकारक हुन्छ । अझ मासु पकाउँदा आगोमा पोलेर, तारेर पकाउँदा यस्तो खान्कीले मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा क्यान्सर गराउने तत्व शरीरमा उत्पादन गराउन मद्दत पुर्याउँछ । साथै, पाचनप्रणालीमा समेत यसले गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ ।
मासुका लागि पशुपन्छी खरिद गर्दा स्वस्थ पशुपन्छी छान्ने ।
धेरै मासु एकैपटक नकिन्ने, आवश्यकताअनुसार किन्ने ।
फ्रिजमा ताजा मासुलाई ४८ घन्टासम्म मात्र राख्ने ।
फ्रिजमा मासु राख्दा छोपेर राख्ने ।
मासुलाई टुक्रा–टुक्रा बनाएर फ्रिजमा माइनस १८ देखि ३० डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रममा राख्ने ।
मासुमा अम्लियपनाको मात्रा ५.७ पिएचभन्दा कम र ६.३ पिएचभन्दा बढी हुनुहुँदैन ।
मासु सकेसम्म ७२ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा पकाउने ।
जमरा खाँदा यति धेरै फाइदा !
यसरी बनाउनुस् मटन ग्रेभी
बच्चालाई कम स्तनपान गराउने महिला स्तन क्यान्सरको उच्चजोखिममा
२०७८ आश्विन १६, शनिबार
गौरामा किन खेलिन्छ देउडा ?
२०७८ भाद्र १४, सोमबार
बोडेका बुद्धकृष्ण बाग श्रेष्ठले छेडाए आठौँ पटक जिब्रो
महालक्ष्मीमा लिङ्गो उठाएसँगै बिस्काः जात्रा शुरु, मध्यपुरथिम...
कोरोना संक्रमण जोखिमः स्थानीय प्रशासनद्वारा विस्केट जात्रामा...
२०७७ चैत्र २३, सोमबार